Ọtụtụ ndị taa na- emekwa ama banyere Pizza ~ Jasa Buat Web MLM Desain
06.11 Juragan Channel No comments
Ọtụtụ ndị taa na- emekwKuliner Balikpapan a ama banyere Pizza , Pizza bụ ụdị ihe oriri mere site na nke nkiti Efrata achịcha na e nwere ndị a dịgasị iche iche topping gbakwunye na ekpomeekpo nke Pizza . Ke ofụri ofụri , Pizza ike na a ga- zụrụ ma ọ bụ nke enwetara site na otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ iri ihe oriri ebiet. Ma, site n'ịmụta otú e si eme ka Pizza ndị na-esonụ nwere ike ịbụ na ị nwere ike ịgbalị ime ka gị onwe gị Pizza ke ufọk ye ubon. N'ihi na n'ezie ọ dịtụ mfe ụzọ mee ka Pizza ma ọ bụrụ na e nwere keamauan nke onwe gị.
Akụrụngwa achịcha Pizza
5 g nzi yist
500 g elu protein ntụ
10 grams nke nnu
375 ml nke mmiri ọkụ
50 grams aran olive
Olee otú ime ka a achịcha Pizza
SARANAPOKER.COM AGEN TEXAS POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA Igbari yist na njikọ ya na sugar wears ntakịrị mmiri ọkụ ka yist na-arụ ọrụ , tinyere 5 nkeji
Ebido ntụ ọka na nnu ọnụ. Mgbe ahụ wụsa yist ngwakọta . Igwakorita ruo mgbe ọma blended . Tinye nke fọdụrụ na mmiri na olive mmanụ. Nwuo ruo mgbe ọma blended .
Tinye nke fọdụrụ na mmiri na olive mmanụ. Nwuo ruo mgbe ọma blended .
Megharia mgwakota agwa na na okpokoro ama ofụk na seramiiki
Mgbe ahụ nọgide na- igwakorita ruo mgbe ezigbo onye na-agbanwe mgwakota agwa .
Ozugbo mgwakota agwa bụ ezigbo onye , chekwaa mgwakota agwa n'ime nnukwu efere nke e -agbasa na obere mmanụ iji gbochie n'ịnọgide na , mgbe ahụ, mechie plastic Kechie na ewepụta iji 40 nkeji ruo mgbe N'ụbọchị nke abụọ .
Mgbe 40 nkeji , ndị mgwakota agwa ọkpọ otú ifufe si
Kewaa mgwakota agwa na mgwakota agwa erikpu nzọụkwụ erikpu 150 g.
Jikere a gburugburu Pizza pan dayameta 24 cm . Gbasaa mkpa oyi akwa mmanụ .
Mgbasa Pizza na akpụkpọ anụ trimmed na -ekpuchi elu nke pan .
Ka -eguzosi maka nkeji 10 wee topping pizzas njikere
Agbasaruo ihendori / tapawa tomato Pizza
2 tablespoons olive mmanụ
5 tablespoons SituPoker.com JUDI POKER, AGEN POKER, AGEN JUDI POKER ONLINE INDONESIA BANK LOKALchopped yabasị
3 tablespoons tomato tapawa
8 tablespoons tomato kechoopu
6 ọhụrụ tomato , seeded na coarsely chopped
1 tsp nnu
1/ 2 teaspoon ose
1 tsp oregano ntụ ntụ
1 tsp basil doo ntụ ntụ
Olee otú ime ka Agbasaruo ihendori / tapawa tomato Pizza
Ikpo oliv mmanụ ahụ, saute yabasị na garlic ruo mgbe keisi
Tinye tomato mado , tomato ihendori , tomato , nnu, ose , sugar , oregano ntụ ntụ , na basil doo ntụ ntụ . Osi nri ruo mgbe esi na thickened ahụ wepụ ka jụụ
esi mee ka PizzaEfrata nke Pizza toppings
50 ounces grated cheddar chiiz
2 iberibe sliced ​​amịrBUNDAPOKER.COM AGEN TEXAS POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYAị soseji bụla dị ka uto
2 iberibe ọhụrụ sliced ​​tomato na uto
50 ounces shredded mozzarella chiiz
2 lbr smoked beef, sliced ​​ma ọ bụ plaid uwe gị uto
1 mgbịrịgba ose , seeded na bee n'ime n'ámá
10 mbak mushrooms , thinly sliced
1/ 2 yabasị , sliced ​​igbe
Terahir kwụpụ -esi mee ka Pizza
Mgbe a Pizza bee i kere iwepụtakwu pan , prick - prick akpụkpọ elu na-eji ndụdụ
Ete n'elu nke anụ ahụ na a ihendori / tomato tapawa ahụ akakade oyi ruo mgbe ezigbo onye na -ekpuchi elu nkeSenangPoker.com Agen Judi Poker Online Terpercaya Indonesia Pizza bee .
Tata topping Efrata na asatọ gị , detụ ire -ekpuchi na grated mozzarella chiiz topping ikpuchi niile na-ebupụta
Ekem akpọọ nkụ na oven nke 15-20 nkeji tutu esie ya n'ụzọ zuru okè ma gbazee mozzarella chiiz
Ije Ozi na -ekpo ọkụ Pizza na chili ihendori na tomato kechoopu karama mmasị .
N'otu aka ahụ, mmadụ ole na ole nzọụkwụ na -esi mee ka a Pizza aga na ya pụta tọrọ ụtọ. Gbalịa chee na Pizza mgbe ọ ka na- ọkụ sensashion mgbe eri Pizza bụ nnọọ ụtọ na -emekwa ka ị na hooked n'ezie . Ọ na- adabara a mere n'ụlọ jere ozi dị ka n'ehihie na hụrụ n'anya.